Maalinta: 9-ka July, 2018
Gawaarida Gawaarida Gadashada
Iibsiga Gawaarida Gawaarida ANTALYA METROPOLITAN GAADIIDKA QIIMAYNTA IYO QIIMEYNTA RAIILKA SIYAASADKA ANTALYA 3 STAGE TRAMVAY VEHICLE SIYAASADDA IYO XIRIIRKA Iibsiga Iibsiga Sharciga Iibsiga Dadweynaha No. 4734 19 [More ...]
BTS Laba Maamulaha Albuz: I TCDD Jidka Gargaaridda iyo Dayactirka Waddooyinka Gaarka loo leeyahay ee B
Ururka Shaqaalaha Gaadiidka ee Qaramada Midoobay Istanbul 1 No. Ersin Albuz Gudoomiyaha Laanta, soL'a wuxuu ka hadlay shilka tareenka ee ka dhacay Tekirdag. Albuz wuxuu ku lug lahaa shaqsiyaadka gaarka ah ee dayactirka iyo howlaha dayactirka TCDD. [More ...]
Natiijada hiddaha ee Enh in la geeyo xarumaha gawaadhida ee ku jira qaybta maareynta mashruuca korantada
Kayaş - Irmak - Kırıkkale - Çetinkaya, Enh Soo jiidashada Waxyaabaha Isbadalka ah ee lagu sameeyo Wajahadda Mashruuca Korontada iyo Korontada [More ...]
Tababaraha 2 oo lagu xidhay Tekirdağ
Edirne iyo Istanbul Halkalı 362 tareen oo leh 6 rakaab ah iyo 5 shaqaale ah oo udhaxeeya degmooyinka Muratlı iyo Çorlu ee xaafada Tekirdag Sarilar roob dartiis dartiis [More ...]
7 / 24 Raadinta Gaadiidka Dadweynaha ee Ankara
Dawlada Hoose ee Magaalada Ankara waxay sii waddaa talaabooyin cusub maalin kasta si loo hubiyo in dadka reer Ankara ay ku sii wadi karaan gaadiidkooda hab ku habboon oo isku dubbaridan. In kasta oo wax cusub lagu daro nidaamyada gaadiid ee jira, la socoshada nidaamka gaadiidka ayaa waliba ah mid weyn. [More ...]
Incan Sincan-Batıkent-Kızılay Metro Line veren, oo sanadaha u adeegaysay magaalada caasimada ah qiyaastii 4,5, waxay bilaabeen inay khibrad u yeeshaan ku habboonaanta gaadiidka aan kala go 'lahayn. Duqa Magaalada Ankara Assoc. Dr. Mustafa Tuna's “Bed Transferkent Transfernnnnnn winkasta oo wadadan la saaray waa laga saaray. [More ...]
Mashruucyada Wadooyinka ee Gaziantep
Dowladda Hoose ee Gaziantep, wadooyinka lagu xiro wadooyinka ee dhammaan degmooyinka ayaa ah mid aan kala go 'lahayn. Wadada dhererka dhir kulul ee loo yaqaan '2014 kilomitir kulul inta u dhaxaysa 2017-196 sano ee Nizip, Oğuzeli, Nurdağı, İslahiye, Araban, Yavuzeli iyo Karkamış, 881 kilomitir [More ...]
Duqa magaalada Toçoğlu wuxuu la wadaagay mashruuca baarkinka gawaarida dadweynaha in laga dhisi doono agagaarka Dugsiga Hoose ee Atatürk oo ay dadwaynuhu la wadaagaan akoonkiisa warbaahinta bulshada. Waxaan dhiganeynaa barta ay ku taal Atatürk Primary School. halkan [More ...]
Gaadiidka Dowlada Hoose ee KocaeliPark A.Ş. isagoo qabanaya 267 duullimaad maalin walba gudaha Akçaray, 767 kun oo 636 rakaab ah ayaa bishii Juun qaaday. Ilaa iyo hadda, wadarta guud ee 7 milyan 896 kun 814 rakaab ah ayaa ku sugan Akçaray'la [More ...]
One Piece Cattle
Gaadiidka Dowlada Hoose ee KocaeliPark A.Ş. Labisyada loogu talagalay dadka waddaniyiinta ah ee codsiyada yunifoomka ah ayaa la hirgaliyay. Vatmanlar waa lebis xagaaga oo ay kujiraan jaakadaha cimaamado iyo shaati cad. [More ...]
Dilovası ayaa sahlanaan doonta helitaanka galbeedka Junction
Dowladda Hoose ee Magaalada Kocaeli waxay ka shaqeyneysaa isgoyska galbeedka si loo fududeeyo albaabbooyinka loo galo oo looga baxo bartamaha magaalada Dilovası laga bilaabo jihada Istanbul iyo Ankara. Mashruuca halkaasoo ay ka bilaabatay howlihii shaqada, gacanta 3 wax soosaarida qashin-qubka ayaa sii socota [More ...]
IMM waxay u dirtay koox samatabbixin ah si ay ugu tababaraan Tekirdag
Dawladda Hoose ee Magaalada Istanbul, amar ku bixitaanka Duqa Magaalada Uysal Tekirdag Corlu oo u dhow shilka tareenka iyo 11 shaqaalaha badbaadada ah ayaa u dirtay 24 gawaadhi badbaadinta si ay wax uga qabtaan. Inta udhaxeysa degmooyinka Muratlı iyo Çorlu ee Tekirdağ [More ...]
Xaqiiqsadeen Fatal Shil Tareen ee Turkey
Shilka ayaa tareen dalka Turkiga ka dhacay dad badan oo naftooda ku waayay ama ay ku dhaawacmeen. Shilalka ka dib, dayacaad, dayactir ama hab-shaqsiyaad gaar-gaar u ah tareenka ayaa la yimid baaritaano ayaa la bilaabay. Laakiin markii shilalka ay iloobaan, dayacaad [More ...]
Shirkadda Dhismaha Waddada 'Sirkeci-Uzunköpr', 'Unitek Construction waxay ka mid tahay mashaariicda la dhammaystiray, shirkaddu waxay u timid bayaanka ay khusayso. Sawirada buundada Tekirdağ oo shil tareenku ka dhacay meel cimilo ah oo ciid ka buuxaan ayaa shacabka u muujisay. [More ...]